Maraykanka oo kordhinaya ciidamadiisa ku sugan Bariga Dhexe | Awdalmedia.com
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu u dirayo ciidamo dheeraad ah oo gaaraya 1.500 oo askari Bariga dhexe iyadoo ay cirka isku sii shareereyso xiisada ka dhex taagan Maraykanka iyo Iran.
Isagoo kula hadlayay warfidiyeenada Aqalka Cad kahor inta uusan ugu ambabaxin booqasho uu ku tagayo dalka Japan ayuu Trump ku macneeyay ujeedka loo dirayo ciidamada inay tahay Is Ilaalin lagu doonayo in lagu sugo ammaanka ciidamada Maraykanka ee jooga Bariga Dhexe.
“Waxaan dooneynaa oo kaliya is ilaalin waxaana direynaa ciidamo aan badneyn.”ayuu yiri Trump.
“Hadda ma filayo in Iran ay dooneyso dagaal, weliba hubaashii uma malaynayo in ay rabto in ay annaga nala dagaalanto.”ayuu sii raaciyay.
Maamulka Madaxweyne Trump ayaa hore ugu wargeliyay Congresska ciidamada dheeraad ah ee loo dirayo Bariga Dhexe.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibbada Iran Javad Zarif oo booqasho ku jooga dalka Pakistan ayaa markale ku celiyay sida ay ugaga soo horjeedaan in ciidamo Maraykan ah la keeno gobolka.
“Iran waxa ay arki doontaa dhamaadka Trump,Balse Trump marna ma arki doono dhamaadka Iran.”ayuu yiri Zarif kahor inta uusan Trump ku dhowaaqin ciidamadan lagu kordhinayo Bariga Dhexe.
Horraantii bishan ayaa dowlada Maraykanka waxa ay u dirtey Bariga Dhexe maraakiibta dagaalka ee xambaara diyaaradaha iyadoo sheegtay in ay dareentay halis ka soo socota dalka Iran.